Siyaasadda soo celinta - Wevino.store
Waxaan damaanad qaadeynaa inaad ku qanacsan tahay alaabtayada. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la raacayo shuruudaha EU Online iyo Fogaanta Iibinta Fogaanta, waxaad xaq u leedahay inaad joojiso amarkaaga wakhti kasta 14 maalmood gudahood markaad alaabtaada hesho. Waqtiga baajinta waxay ku egtahay dhamaadka 14 maalmood oo shaqo oo ka bilaabaneysa maalinta xigta maalinta aad alaabta heshay.
Mabaadi'da lacag celinta aasaasiga ah ee barxadeena internetka:
1. Waad joojin kartaa amarkaaga wakhti kasta kahor buuxintiisa oo waxaad kuheli kartaa lacag celin buuxda. Uma baahnid inaad nala soo xiriirto si aad sidaas u yeelatid. Kaliya guji "baaji" ama amarkaaga bogga xaqiijinta ama bogga koontadaada.
2. Waad joojin kartaa amarkaaga wakhti kasta xitaa kadib markaad si buuxda u buuxiso 14 maalmood gudahood markaad alaab hesho - Kaliya guji halkan. Qor sababta soo noqoshada, xitaa haddii aadan kaliya jeclayn ama aadan u baahnayn mar dambe oo ku soo qaado calaamaddaada celinta maraakiibta emaylkaaga. Waxaa laguu soo celin doonaa 10 maalmood gudahood ka dib marka aan dib u soo celino sheygayaga oo aan dib u cusbooneysiino.
3. Si laguu soo celiyo fadlan ku soo celi sheygaaga furitaankiisii ​​asal ahaan oo si ammaan ah u baakadeeyey 14 maalmood gudahood markii aad heshay qayb ka mid ah isla markaana lacag celin buuxda ayaa la soo saari doonaa iyada oo laga jareyo keenista iyo kharashaadka ururinta. Kharashka rarka iyo maaraynta lama soo celin karo haddii alaabooyinka la keenay ay khaldan yihiin, waxyeello soo gaadhay ama cilladaysan tahay mooyaane. (Tani ma saameynayso xuquuqdaada sharciyeed haddii ay dhacdo alaabo cilad leh).
Fadlan ogow - haddii aad dooratid inaad soo dirto shay adigu oo aanad u soo marin adeeggayaga ururinta waraaqaha waxaan kugula talineynaa inaad adeegsatid adeegyo habboon si aad u daboosho qiimaha alaabtaada haddii ay dhacdo waxyeello soo gaadhay intii lagu jiray hawsha soo celinta.
Waxyaabaha aan la rabin ee dib noogu soo noqda iyaga oo waxyeello leh oo aan la rarin iyadoo la adeegsanayo ururinta ama adeegga dhoofinta la oggolaaday lama soo celin doono.
Iyadoo la raacayo Xeerarka Iibinta Fogaanta ee Midowga Yurub ee 2000, waxaad xaq u leedahay inaad ku joojiso amarkaaga 14 maalmood gudahood, laga bilaabo maalinta ka dambeysa Alaabta laguu keenayo adiga (ama qof aad taqaanid oo alaabteena uga saxeexay shirkadayada). . Inta lagu jiro waqtigan waxaad noogu soo celin kartaa Alaabta noo soo celis buuxda. Lacag celin buuxda ayaa la bixin doonaa iyada oo alaabada aan u aragno inay ku jiraan isla shuruudaha laguu soo gaarsiiyey iyo in codsiga la kansalka lagu helo qoraal. Amar kasta oo la joojiyo waxaa lagu soo celin doonaa 10 maalmood gudahood laga bilaabo markii aan helno alaabada la soo celiyey. Haddii alaabta la soo celiyey aynaan u arkin inay ku jiraan xaalado la mid ah kuwii adiga laguu keenay, annaguna waan kugu soo celin doonnaa Alaabta oo lacagtii dib-u-bixinta ayaa noqon doonta mid adiga kugu habboon oo aad bixin doontid.
Macaamiisha raba inay joojiyaan amarradooda wixii la xiriira dhalmada kadib waa inay:
Si macquul ah u daryeela Badeecadaha la xiriira waana inaan loo isticmaalin, la furin ama la cunin; oo aad ku soo celiso Alaabta ku habboon 14 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda la keenay, oo lagu buuxiyo dhammaan baakadaha khuseeya iyo isla shuruudaha laguu soo diray.